बोले अमरेश, भने : ‘यो व्यवस्था बचाउन कठिन छ’
बिहीबार, बैशाख २ २०७८
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली जटिल मोडमा पुगेको भन्दै यो व्यवस्था बचाउन कठिन रहेको बताएका छन् ।
उनले एक अन्तर्वार्तामा भने, 'जुन अवस्थामा अहिलेको राजनीतिको कोर्ष अगाडि बढ्यो, त्यसमा कुनै पनि शक्ति प्रतिबद्ध छैनन्, अवस्था फेरिएको छ, स्वामित्व लिने कोही छैनन्।'
समसामयिक विषयमा एपीवान टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘द ब्राभो डेल्टा शो’ मा भूषण दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा सांसद सिंहले तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात दलबीचको बाह्र बुँदे सहमतिबाट शुरु भएको राजनीतिक प्रणाली अहिले संकटमा परेको दाबी गरे ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारसमेत मानिने सांसद सिंहले बाह्र बुँदे सहमति गराउन सहयोग गर्ने-गराउने कुनै पनि पक्ष अहिले शक्तिमा नरहेको बताए । बाह्र बुँदे सहमतिको वातावरण भारतले नै बनाइदिएको बताउँदै उनले भने, ‘भारतको सहयोग विना त्यो संभव नै थिएन ।’
डा. सिंहको बुझाइमा बाह्र बुँदे सहमति गराउने र त्यसको स्वामित्व लिने पक्ष कमजोर बन्दै जाँदा अहिलेको समस्या आएको हो । ‘भारतमा कांग्रेस आईको सरकार थियो, अहिले बिजेपीको छ । बिजेपीले स्वामित्व लिँदैन । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कमजोर भए । एमालेमा पनि माधवकुमार नेपाल पक्ष शक्ति बाहिर छ।’
२०७२ मा जारी गरिएको संविधानका प्रमुख उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता भएपनि ती उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने अवस्था नरहेको उनले संकेत गरे । 'राजनीति जुन रुपमा अगाडि बढेको छ, यी उपलब्धि गुम्नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ,' दिल्लीस्थित चर्चित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका ड़ा. सिंहले भने ।
'भारत बलियो खेलाडी'
नेपालमा राजनीतिक उतार चढाव बढ्दै जाँदा नेपालमा विदेशी चलखेल पनि उत्तिकै छ । पश्चिमा शक्तिहरुले पनि आन्तरिक मामिलामा खेल्न थालेको छन् । ‘सी विचारधारा’का नाममा चीनले पनि खेलिरहेको उनको बुझाइ छ ।
'भारत त पहिलेदेखि नै नेपालमा खेलिरहेको छ,'' उनले भने, ‘पहिले राजा, दल र भारत थिए, अहिले राजा छैनन्, भारत छ, अरु पनि थपिएका छन् ।'
भारत सबैभन्दा बलियो खेलाडीको रुपमा रहेको उनले विश्लेषण गरे । ‘भारतकै कारण सबै व्यवस्था टिक्ने र हट्ने गरेका छन्’, उनले भने,‘भारतकै सहयोगमा तीस वर्ष पन्चायत टिक्यो, भारतकै सहयोगमा राजतन्त्र हट्यो ।'
भारतको संस्थापन पक्ष अहिले नेपालको प्रणालीसँग सन्तुष्ट नरहेको तथा नेपालका सबै दल र संस्थाहरु कमजोर भएको उनले बताए ।
सिंहले नेपालको शासन व्यवस्था सरकार र सरकारी संयन्त्रले नभई माफियाले सञ्चालन गरिरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाए ।
संवैधानिक अंगहरुदेखि राजनीतिक दलहरु सबै माफियाले कब्जा गरिसकेको उनले दावी गरे । 'आठ-दश जना माफियाले सबै चलाइरहेका छन्,' उनले भने ।
ती माफिया को हुन् त ? उनले नाम खुलाउन चाहेनन् । ‘सुरक्षाको खतरा छ,मैले नाम भनौं, तपाईंको स्टुडियोबाट गाडिसम्म पनि जान पाउँदिन, मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुस्, (अर्को अन्तर्वार्तामा) म नाम भनिदिन्छु ।’
समाधान नयाँ शिराबाट
कांग्रेस नेता सिंहले वर्तमान सरकार र संसदले समाधान दिन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले तत्काल अर्को चुनावको संभावना पनि नरहेको दाबी गरे । ‘यो सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ, तर, संसदले निरन्तरता पाउने संभावना कम छ,’ चुनावको संभावनातर्फ संकेत गर्दै उनले भने ‘यही संसदबाट वैकल्पिक सरकार पाउने संभावना देखिँदैन।’
सरकारले चुनावको घोषणा गरे पनि चुनाव हुने संभावना कम रहेको उनको दाबी छ । 'यही समीकरणबाट चुनाव नै भयो भने पनि समाधान निस्किंदैन,' उनले ठोकुवा गरे । 'यही अवस्थामा चुनाव भएर परिणाम आए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जान्छ,' उनले भने ।
वैकल्पिक शक्तिको खाँचो रहेको भन्दै उनले अब नयाँ व्यक्तिहरु नेतृत्वमा नआएसम्म मुलुकले निकास पाउन नसक्ने दावी पनि गरे ।
उनले नयाँ राजनीतिक परिवर्तन पछि प्रमुख दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तन हुने भविष्यवाणी पनि गरे।
तर उनले त्यस्तो आकलन को आधार के हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।
निकै विश्वस्त र तयारीका साथ आएको जस्तो देखिने डा. सिंहले नेपालका सबैजसो प्रधानमंत्रीहरुले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुखहरुसंग भेट्ने गरेको खुलासा गरे।
तर उनले भने," यस अघिका ती भेटहरुको विवरण बाहिर आउंदैनथ्यो, अहिले ओलीजी (प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली) ले गरेको भेट मात्रै सार्वजनिक भयो। "